Ozi bara uru si Childrenmụaka Na-aga N'aka bylọ Akwụkwọ '' Akpọla nkụ, mmanụ dị ọkụ! ' | RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Aegean35 IzmirOzi bara uru si Childrenmụaka Na-aga Schoollọ Akwụkwọ 'Akpọla nkụ, mmanụ dị ọkụ!'
16 / 11 / 2019 35 Izmir, Mpaghara Aegean, General, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Isi akụkọ, Turkey
ozi bara uru sitere n’aka ụmụaka na-aga ụlọ akwụkwọ site na igwe kwụ otu ebe anaghị adọ mmanụ ọkụ n’ọkụ
Ozi bara uru si Childrenmụaka Na-aga Schoollọ Akwụkwọ '' Akpọla nkụ, mmanụ dị ọkụ! '; Obodo İzmir nke Metropolitan na-aga n'ihu na mgbasa ozi ya "Ka anyị gaa ụmụaka site n'ụlọ akwụkwọ Bisiklet. Mgbe ụmụ akwụkwọ Mavişehir Eraslan College gachara Karşıyaka Studentsmụ akwụkwọ Evin Leblebicioğlu Middle School gara ụlọ akwụkwọ ha ụnyaahụ site na igwe kwụ otu ebe.
Ozo nke "Ka umuaka jee akwukwo site na igwe anyi si anyi noo" na-aga na İzmir. Mgbasa ozi ahụ gbara ụmụaka ume iji ịnyịnya ígwè gaa ụlọ akwụkwọ Karşıyaka Vinmụ akwụkwọ sekọndrị nke Evin Leblebicioğlu gara. Onye isi oche Affan Arif Erol, ndị nkuzi mmụta mmega ahụ, Atilla Küçük na Mustafa Atalay Akbay Karşıyaka Gatheredmụaka zukọtara n'ọnụ ụzọ bazaa, na-agafe igwe kwụ otu ebe. Studentsmụ akwụkwọ jiri bọọdụ e dere ede M na-aga Schoollọ Akwụkwọ site na igwe kwụ otu ebe, elegharaghị inye ndị okenye ha ozi nke akpọrọ “Bicycle bụ ahụike”, “gaschụ mmanụ ọkụ, gbaa abụba ọkụ”. A pịa pịnye ahụ, ụmụ akwụkwọ ahụ rutere ụlọ akwụkwọ ha n'ime nkeji nke 10.
Bike pụtara pụtara ahụike
Onye isi Affan Arif Erol, ụlọ akwụkwọ ahụ hibekwara klọb ịgba bọọlụ, na ngwụsị izu site na ntinye ụmụ akwụkwọ na ezinụlọ kwuru na ha haziri njem ịgba ígwè. N’imesi ike na otu n’ime ihe dị mkpa dị n’obodo ndị dị ugbu a bụ ohere dị mfe ịnweta igwe na iji ebe mmiri na-aga n’ihu, Erol kwuru, “Ebum n’uche anyị bụ ịkụziri ndị okenye echi. N'ikwu na ịgba ígwè bụ ihe na-atọ ụtọ, ụmụ akwụkwọ na-ekwu “Igwe igwe kwụ ọtọ pụtara ahụike. Maka obodo dị ọcha na mkpọtụ, ka ụgbọ ala belata ma ụzọ igwe kwụ otu ebe abawanye. Hapụ ndị okenye ka ha jiri ịnyịnya ígwè. Kpachara anya ma nwee nkwanye ùgwù maka ndị na-agba ịnyịnya na okporo ụzọ ”.
Ebumnuche bụ ọgbọ nke ndị na-agba ịnyịnya ígwè ebe niile
Studentsmụ akwụkwọ, ndị uwe ojii na-ahụ maka ịnya ụgbọ ala nke Ngalaba ndị uwe ojii Izmir na Ngalaba Transportgbọ njem Izmir Metropolitan Munke Bike Pedestrian na Onye isi nhazi. Özlem Taşkın Erten na ndị ọrụ nchekwa Aslıhan Tekin na Burak Tümer sokwa. Erten kwuru na ha rụpụtara ọrụ iji mee İzmir ka ọ bụrụ "bicyclezmir" obodo ịgba agba wee sị :: Dị ka Obodo Isi Obodo; anyị na-abawanye ụzọ ndị na-agba ịnyịnya dị ugbu a, hazie ihe omume iji gbaa ndị mmadụ ume iji ụgbọ ịnyịnya na-aga n'obodo mepere emepe ma zụlite mmekọrịta mba na mba Anyị na-echebara ụmụaka echiche. N'ihi na omenala ịgba agba na-etolite n'oge a. Awarenessmepụta mmata na ụmụaka bụ ibute ụzọ nke ọdịnihu n’enweghị ụgbọala. Anyị na-achọ ọgbọ na-agagharị agagharị ma na-agagharị n'obodo niile. ”
Ụmụ IMM Na-abịa Ụlọ Akwụkwọ Site na Eke
Ụmụaka Na-aga Ụlọ Akwụkwọ Site na Bicycle na Bilecik
Bmụaka Ndị tomụaka na Ihe Omume Schoollọ Akwụkwọ na Bilecik
IMM na-akwado igwe kwụ otu ebe maka ihe omume ụlọ akwụkwọ!
A ga-echekwa Osimiri Eurasian na mmanụ ụgbọala na 229 pound kwa ọnwa
Pụrụ iche maka Elọ Ọrụ Egwuregwu Egwuregwu Mba nke Victoria Egwuregwu Ma Tun
Ozi gbasara mmadụ na traz na Gaziantep
Ozi sitere na President Erdoğan na Denizli Teleferik
Buses na Social Ozi na Kocaeli
Ihe dị mkpa maka Railway Trabzon Erzincan Railway…
Onyinye bara uru nye ndi muhtars si Izmir Obodo ukwu
Ihe omuma nke bara uru na YHT Main Care Center
10 November Ozi si Demok
Mavişehir Eraslan College
Icymụaka na-aga igwe kwụ otu ebe
Agam Ulo akwukwo by Bike